Unboxing uye Kuedzwa - Toolsdecuisine.com
Unboxing uye Miedzo
"Mvura kune vose"
Tiri kutaura pamusoro pemidziyo yedu yekicheni muItaly!
06 December, 2018 • baby plate • silicone plate • italy • kicheni chigadziko • mubatsiri • ushamwari • bvunzo • thermomètre • kitchen thermometer • thermometer • kicheni utensil
Blog Italian "In My Sweet Kitchen" akaedzwa 5 cookware zvedu; tweezers pineapples, kubika lämpömittari, keke slicer, anodzivirira mukombe akaumbwa munwe Smiley, Smiley mahwendefa mwana. Nokuti vaya vanotaura Italian tikamurega ukaona nyaya pano: http://inmysweetkitchen.blogspot.com/2017/09/outilsdecuisinecom-tutto-cio-che-puo.html Nokuti vamwe zvichiri yedu Google shamwari yekushandura!
"Ndinovonga Outilsdecuisine.com, handichiri kuchera minwe yangu"
24 October, 2018 • mamanetsachipie • kicheni chigadziko • mubatsiri • ushamwari • finger cup protector • bvunzo • kicheni utensil • mavhidhiyo
mumwe wedu "Mamanetsachipie" akaedzwa kwamuri kuchengetedza munwe serin'i Smiley, pano ndizvo akati: "With Outilsdecuisine.com, handina kucheka minwe yangu" Kana isu kubika murume aiva mukana wekusagona kugadzika tsoka mukicheni uye tinorasikirwa netsika. Saka kungobika hakuiti basa asi kunakidza! Nguva yokuti iwe ugadzirire dessert, chikafu chakanakira mhuri yake, kana nevana vake. Ndicho chikonzero ndiri mukicheni yangu ndinongoita izvo iye ...
Mudiwa wedu akaedza muchero wacho nekunyengera
18 October, 2018 • drink • michero • muchindwi • bhodhoro remvura rine bundu • infusion gourd • gourd for sport • yoga gourd • hydration • infuser • mutambo • Yoga
Gore rakapera nemumwe wedu Isabelle naZaza (lesrecettesdezazaetdesescops.com) akanga akaedzwa yedu mvura guchu muchero infuser kuti mutambo, uremu, kuti unakirwe! Kana iwe wakarasikirwa neBlog yake nyaya uye uchida kuziva maonero ake, tora pano. Uye nokuda latecomers mune mubvunzo tinofanira reactivate ari dhisikaundi bumbiro iye anotaura naye nyaya, kusvikira Svondo manheru 23h59 (21 / 10 / 2018), nguva ino regai kurasikirwa mukana wako! 30% kutora nekodhi iyi panguva yekuraira kwako: LESRECETTESDEZAZAETDESESCOPS
Mudiwa wedu Audrey akaongorora slicer cake
11 September, 2018 • kicheni chigadziko • mubatsiri • ushamwari • bvunzo • shamwari yekuedzwa • chigadzirwa test • Slicer test • cake slicer • kicheni utensil
Pakupedzisira kwezhizha, shamwari yedu Audrey (Les Petites Douceurs D'Audrey) yakaedza mazano edu akachenjera keke. Zvinosuruvarisa kuti hatina kuwana mukana wokudzorera nyaya yake, asi sezvatinoti "zviri nani nguva refu kupfuura"! Pano kunyanya nayo akapedzisa: "Cheka zvimedu keke mumasekonzi Izvi tsanzira keke slicer aripo kukubatsira nyore uye zvakakwana akacheka chimedu keke zvakaenzana pasina muvhuruvhuru Just !. shandisa slicer pamusoro pekeke, simbisai zvishoma, ipapo iwe unogona kuisa tsanga padanda re ...
Mharidzo yeVhidhiyo yeSintainable Cake Adjustable Cake Circle Mold
14 August, 2018 • cake circle • Foroma • cake mold • simbi yesimbi • kicheni chigadziko • bvunzo • kicheni utensil • mavhidhiyo • YouTube
Takanga tatobudisa video yeUnboxing yeStainless Steel Cake Circle Mold, asi ino nguva iri kuita! With ichi mudziyo chinjika dhayamita pamusoro dambudziko muforoma (dzimwe nguva magwa anokwasviwa kana aisa sandara), uchazonakidzwa kuita mharidzo vakakwana, nyanzvi zvionerei :-) uwane mashoko pamusoro chigadzirwa ichi uye bhuku, tinya pano.
Vhidhiyo mharidzo ye Watermelon Cup
bhodhoro remvura rine bundu
plank banga pliers
Knife 2 1 Kucheka Bhodhi
Zvose Zviitiko Zvokutengesa
Bhalisa kuti uwane zvigadzirwa zvekutsvaga
© 2019 Copyright CookingTools.com. Kodzero dzose dzakachengetedzwa